Nabata na Outboard-Boat-Motor-Repair.com | Ụgbọala ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri
Ebumnuche bụ isi nke saịtị a bụ ịkọ ahụmahụ m ma nye ndụmọdụ na usoro ndụmọdụ bara uru iji mee ka Evinrude na Johnson pụta n'ụgbọ ụgbọ mmiri ka ị nwee ike ime otu ihe ahụ. Ọzọkwa, m na-enye ụfọdụ akụkọ ihe mere eme na nke ọ bụla n'ime motọ ndị a ka i wee nwee ekele maka ha. Ọ bụrụ na ị nwere otu n'ime ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na m na-ekwurịta banyere "Tune Up Projects," ma ịchọrọ ịkụziri agadi Evinrude ma ọ bụ Johnson na ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri iji mee ya nke ọma, nke a bụ ebe maka gị. Ọ bụ ezie na saịtị a abụghị onye na-anọchi anya akwụkwọ ntuziaka, akwụkwọ ndị na-akọwa ọrụ ndị a na-agụnye ntụziaka nzọụkwụ site na ntụziaka nakwa foto ndị gafere ihe ị ga-ahụ na ntuziaka ọrụ. Ka oge na-aga n'ihu, ana m atụ anya itinyekwu "Mmemme Nzuzo Tune" na ndepụta dị n'okpuru ebe a. A na-enwe ekele mgbe nile, mana m pụkwara ịkatọ nkatọ ahụ.
Ihe agbanweela ọtụtụ na 100 + afọ gara aga ma ụfọdụ ihe ka dị otu. Ịhụ ụgbọ mmiri n'anya, mmiri, n'èzí, na ísì na ụda na onye ọ bụla ga-ejikọta ya na bọmbụ ụgbọ mmiri. Ha bụ ihe niile na-eweta echiche dị mma n'obi anyị ma soro oge dị mma. Ọtụtụ ndị na-adabere na Evinrude motors iji mee ka ha lọta n'enweghị nsogbu, iji gbanahụ oké ifufe, inye ike mgbe na ebe ọ dị mkpa ma maka ọrụ dị oke mkpa na ụwa dum nke ntụrụndụ. Maka ihe niile ị rụzuru, anyị na-ekele gị Ole Evenrude. Mee ka i zuru ike n'udo ma cheta ya mgbe nile.
Anyị na-ekele Ole Evinrude na echiche ya, 100 + afọ gara aga maka ịtụkwasị bọmbụ dị na azụ nke ụgbọ mmiri, na-eweta oge ọhụrụ nke njem ụgbọ mmiri.
Biko PỊA EBE A ịnọgide na-ede akwụkwọ si iwebata.